आज शनिबार, शनिदेवलाई यसरी खुशी पार्नुहोस्, सबै रोकिएका काम बन्नेछ्न् ! – Chautari Online
आज शनिबार, शनिदेवलाई यसरी खुशी पार्नुहोस्, सबै रोकिएका काम बन्नेछ्न् !
October 24, 2020 396
हाम्रो दैनिक जीवनमा शनिबार ले विशेष महत्व राख्दछ । शनिबार अर्थात् शनिश्चर शनिदेव को दिन हो । यस दिनमा जेजे हुन्छ शनिदेव को कृपाले हुन्छ । यदि तपाईले शनिदेवलाई पुजा गर्नु भयो अथवा शनिदेवलाई खुसि बनाउनु भयो भने तपाईको जीवनमा दुखले अनि अभावले कहिले छुने छैन । हामीले सुन्ने गरेका छौ कि जीवनमा शनिको आगमन एक भयङ्कर कष्टकारी हुन्छ तर जब कसैलाई शनिदेवको कृपा हुन्छ त्यो व्यक्ति अचानक सफल हुन्छ र धनि हुन्छ ।
यो कुरा विभिन्न शास्त्र मा उल्लेख गरेको छ । देवहरुमा फरक देव शनिदेवले मानिसको जीवनमा दुई प्रकारले प्रभाव परेको हुन्छ । आज हामी शनिदेवको पुजा गर्नाले हुने फाइदाहरुको बारेमा बताउने छौ । शनिदेवलाई खुसि कसरि बनाउने ? शनिदेव अरु देव भन्दा भिन्न भएको ले शनिदेवलाई पुजा स्वरूप कुनै कुरा अर्पित गर्नु पर्दैन मात्र तपाईको शुद्द मन भए पुग्छ अनि शनिदेव प्रतिको आदर । शनिको सिद्दान्त ले भन्छ कहिले पनि हामीले कुकर्म गर्नु हुदैन ।
शनिदेवलाई कर्मफल दाता पनि भनिन्छ त्यसकारणले तपाईको सबै कामको लेखा हुने भएकोले सकेसम्म राम्रो काम गर्नुहोस् नकसे नराम्रो काम नगर्नुहोस् । अरुको सेवा दुखि अनि दरिद्रहरुको सेवा गरिब अनि असहायलाई सहयोग गर्नु अनि कसैलाई भेदभाव नगर्नु आदि कुरा हरु ले शनिदेवलाई खुसि पार्न सकिन्छ । पुजा विधिको बारेमा हामी अर्को पोस्टमा उल्लेख गर्ने छौ तर यहाँ हामि मुख्य कुराहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौ ।
शनिदेवलाई खुसि बनाउने अर्को उपाए पनि छ जुन हो तेल चढाउने । शनिदेवलाई काचो तेल चढायो भने शनिदेवको पुजा शिद्द हुन्छ भन्ने विश्वास रही आएको छ अनि अर्को उपाए रामायण शास्त्रमा उल्लेख छ कि जसले अनुमानको आदर गर्दछ त्यसले शनिदेवको कृपा प्राप्त गर्दछ तसर्थ हामिले हनुमानको पुजा पनि गर्नु उचित हुन्छ । हामीले यो जान्नु आवश्यक छ कि पुजाको कुनै विधि हुदैन सब भन्दा पहिले तपाई आफु शुद्द मनले इश्वरको सम्झना गर्नुहोस् अनि इश्वर तपाईसँग खुसि हुनेछन ।
के साच्चै सम्पति प्राप्त हुन्छ ? शनिदेवको पुजाले साच्चै नै सम्पतिको प्राप्ति हुन्छ त्यो पनि एकदम छोटो समयमा । हामिले शनिको विभिन्न दोषहरुको बारेमा त जानेका छौ होला तर शनिदेवको यदि कृपा भयो भने तपाईको जीवन अपत्यारिलो पारा ले सम्पन्न हुन्छ ! आफ्नो बिचार
तल कम्मेन्ट बक्समा लेख्नुहोला!
Prevश्रीमानकै सल्लाहमा ओमान गएकि मनितालाई घर फर्किएपछि श्रीमानले ‘कसको भुँ’डी बोकेर आइस् भनेपछि’…
Nextत’स्करहरद्वारा ह’त्या गरिएका असई गोविन्दकि श्रीमतिको यस्तो छ भनाइ, हामी दुःखीले कसरी बाँच्ने सरकार? (भिडियो हेर्नुस्)